မန်းသီတာ ဥယျာဉ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မန္တလေး နန်းတော်၊ မန္တလေးမြို့
21°59′00″N 96°05′42″E﻿ / ﻿21.98333°N 96.09500°E﻿ / 21.98333; 96.09500
နံနက် ၆:၃၀ မှ ညနေ ၅:၃၀ အထိ ဖွင့်လှစ်
မန်းသီတာ ဥယျာဉ်မှာ မန္တလေး နန်းတော်၏ မြို့ရိုးနှင့် ကျုံးအကြားရှိ မြေကွက်လပ်တွင် တည်ရှိသော ဥယျာဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခင်က မန္တလေး၏ ခေတ်အမှီဆုံးနှင့် အလှပဆုံးဥယျာဉ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ မန္တလေး၏ အကွက်အကွင်းကောင်းသောနေရာတွင် တည်ရှိပြီး စနစ်တကျ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
မန်းသီတာဥယျာဉ်သည် တစ်ခေတ်က နာမည်ကြီးခဲ့သော မသုံးလုံးနယ်မြေသို့ အောင်မာဃစစ်ဆင်ရေး ဆင်နွှဲရာတွင် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနှင့် လွတ်လပ်ရေးကာလကတည်းက ကျော်ကြားခဲ့သောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ တပ်မှူးကြီးဖြစ်သူ ဗိုလ်အာဠာဝကကို ဖမ်းဆီးနိုင်သည့်အတွက် ထိုစဉ်က မန္တလေးမြို့အခြေစိုက် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို ချီးမြှင့်သည့် ဆုတော်ငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည်။ ထိုအချိန်က နမတ တိုင်းမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်စန်းယု ဖြစ်သည်။ ထိုဆုတော်ငွေဖြင့် တပ်မတော်နှင့် မြူနီစီပယ်ပေါင်းကာ ဆောက်လုပ်ထားသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ကျုံးအနောက်ဖက်ရေပြင်တွင် ထိုစဉ်က ငွေ ၉၅ သိန်းအကုန်အကျခံကာ ရေပေါ်ဥယျာဉ်တစ်ခုကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
ကျုံးတောင်ဘက် ၇၃ လမ်းမှ ၇၉ လမ်း၊ ကျုံးအနောက်ဖက် ၂၆ လမ်းမှ ၂၄ လမ်းအကြားတွင် ကျုံးနှင့် မြို့ရိုးကြားရှိ မြေနေရာ၊ အနောက်တောင်ထောင့်ရှိ ရေပြင်တို့မှာ ဥယျာဉ်နေရာ ဖြစ်သည်။ ကျုံးရေပြင်ကို ဖြတ်၍ မေတ္တာပေါင်းကူးတံတားနှင့် တံတားငယ်များဖြင့် လမ်းမနှင့် ဥယျာဉ်ကို ဆက်သွယ်ထားသည်။
ထိုဥယျာဉ်တွင် အရိပ်ရသော သစ်ပင်ကြီးများရှိသည်။ မိုးပျံတံတားလည်း ရှိသည်။ အခါကြီးရက်များတွင် ဖျော်ဖြေရန် တီးဝိုင်းစင်ကြီးများလည်း ရှိသည်။ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံဆိုင်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များ ရှိသည်။ ရေပေါ်ဥယျာဉ်လည်း ရှိသည်။ အခမ်းနားဆုံးမှာ ကျုံးအနောက်တောင်ထောင့် ရေပြင်ထဲတွင် ရှိသောအချင်း ၂၆ ပေ၊ အမြင့် ၉ ပေ ၃ လက်မရှိသော ၅ မြောင့်ကြယ်ပွင့် အုတ်ခုံကြီးပေါ်တွင် အလျား ၁၅ ပေ၊ အနံ ၃ ပေ၊ အမြင့် ၁၄ ပေရှိသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးကြေးရုပ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ညပိုင်းတွင် ကြေးရုပ်ကြီးကို မီးမောင်းများဖြင့် ထွန်းထားပြီး ဥယျာဉ်ကို မီးရောင်စုံထွန်းထားသည်။ လွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားကို ထိုနေရာတွင် အကြီးအကျယ် ၇ ရက် ၇ လီ ကျင်းပခဲ့ဖူးသည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် နန်းတွင်းလုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြ၍လည်းကောင်း၊ ကျုံးကို အသစ်ပြန်လည် တူးဖော်ရန်အတွက်လည်းကောင်း မြို့တော်၏ အကောင်းဆုံးဥယျာဉ်ကြီးကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့တွင် လူထုအပန်းဖြေရ န်ပန်းခြံနေရာများ ရှားပါးလာသည်။ မန်းသီတာ ဥယျာဉ် ကို မှီခဲ့သူများက ထိုဥယျာဉ်ကို ပြန်လည် လွမ်းဆွတ်ကြသည်။ ၂၀၁၆ တွင် အစိုးရအသစ်တက်လာအပြီး မန္တလေးမြို့အတွက် အစိုးရ၏ ရက် ၁၀၀ စီမံကိန်းတွင် ဤဥယျာဉ်စီမံကိန်း ပါဝင်လာသည်။ သို့သော် ဘက်ဂျက်ငွေမရရှိ၍ ဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍနှစ်တွင်မှ လွှတ်တော်မှ ငွေကျပ်သိန်း ၃၀၀၀ ကျော် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဥယျာဉ်အသစ်စီမံကိန်းကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ပုံကြမ်းရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။ သို့သော် တပ်မတော်မှ နန်းတွင်းလုံခြုံရေးအတွက် အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကသာ ဆောက်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဥယျာဉ်အသစ်ကို ၂၆ လမ်း၊ ၆၆ လမ်းနှင့် လမ်း ၈၀ အထိ တောင်ဖက်ကျုံးတစ်လျောက် တည်ဆောက်သွားမည်ဟု မြို့တော်ဝန် မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဥယျာဉ်၊ ကျုံး၊ မြို့ရိုးနှင့် မန္တ​လေး​တောင်
↑ ဖြိုးဖြိုးဇော် (၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၇). "ကျုံးတောင်ဘက်ခြမ်း၌ မန်းသီတာဥယျာဉ် ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန် ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ ပုံကြမ်းရေးဆွဲပေး". ၇ ရက် နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၄၂၈). Retrieved on ၂ ဇွန် ၂၀၁၈.
↑ ယဉ်မျိုးသွယ် (မေ ၂၀၁၇)။ အသစ်ပြန်လည် ဖော်ဆောင်မည့် မန်းသီတာဥယျာဉ် နေရာအား ကျုံးတောင်ဘက် ၆၆ လမ်းမှ လမ်း ၈၀ အထိ ဆောင်ရွက်မည်။ Eleven Media Group။ ၂ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အောင်ကိုဦး (၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇)။ မန်းသီတာဥယျာဉ် တပ်မတော်မှ ပြန်လည်တည်ဆောက်မည်။ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန။ ၂ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မန်းသီတာ_ဥယျာဉ်&oldid=457416" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၁၅:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။